China EAA na-agbaze agbaze nrapado ihe nkiri maka ndị na-emepụta aluminum na ndị na-eweta ya | H&H
Hot gbazee nrapado Film
Uwe Ime ụlọ anyị
Enweghị nsogbu uwe ime
Enweghị nsogbu Shirt
Okpomọkụ Nyefee Label
Igwe nju oyi friji Evaporator
Auto nerchọ Mma
Akpa na akpa
Enweghị nsogbu uwe
Akpụkpọ ụkwụ Ihe onwunwe Lamination
Ihe mkpuchi Badge
Ire ọkụ Retardent Series
Ọdụdọ Nchedo Eletriki
Light Reflective Mezie
EAA na-ekpo ọkụ gbazee nrapado ihe nkiri maka aluminom
Na ma ọ bụ na-enweghị akwụkwọ na
Ọkpụrụkpụ / mm 0.04 / 0.05 / 0.08 / 0.1 / 0.12 / 0.15 / 0.2 / 0.25 / 0.3
Obosara / m / 48cm / 50cm / 100cm dị ka hazie
Mpempe Agbaze 75-90 ℃
Ọrụ nka igwe-igwe akpo oku: 110-130 ℃ 6-30s 0.4Mpa
HA490 bụ ngwaahịa ihe Polyolefin. Ọzọkwa ụdị a nwere ike ịkọwa dịka EAA. Ọ bụ ihe nkiri na-egosi translucent na akwụkwọ ewepụtara. Nọmalị ndị mmadụ na-eji obosara nke 48cm na 50cm na ọkpụrụkpụ 100 micron na friji.
HA490 kwesịrị ekwesị maka ijikọ akwa dị iche iche na ihe ọla, ọkachasị aluminom. Ihe nlere a bu ire ahia na Bangladesh, Pakistan na India. Ọzọkwa na China, anyị na-akwado ọtụtụ ndị na-emepụta ọkụ eletrik a ma ama ogologo oge. Ihe nlere a nwere otutu ihe na-agbaze agba nke ga-eme ka ndi mmadu ghara iguzogide otutu ihe.
1. Ezigbo nyagide ike: N'ihi na metal bonding, ọ na-akpa àgwà nke ọma, na-enwe stong nyagide ike.
2. Na-anaghị egbu egbu na gburugburu ebe obibi: Ọ gaghị enye isi na-adịghị mma ma ghara inwe mmetụta ọjọọ na ahụike ndị ọrụ.
3. Easy hazie na igwe na oru-eri ịzọpụta: Auto lamination igwe nhazi, azọpụta ọrụ na-eri.
4. Nwee ezigbo arụmọrụ na ngwongwo aluminom: ihe nlereanya a dabara na ngwa nke ngwongwo aluminom.
5. Na akwụkwọ ntọhapụ: Ihe nkiri ahụ nwere akwụkwọ bụ isi, nke na-eme ka ngwa ahụ dịkwuo mfe ịchọta na nhazi.
Igwe nju oyi friji
HDA490 Hot gbazee nrapado film na-akpọ EAA na-ekpo ọkụ gbazee nrapado film nke na ọtụtụ-eji na friji evaporator lamination. Nọmalị ihe lamination bụ aluminom panel na aluminum tube. E wezụga, dochie ọdịnala mama na-arapara, na-ekpo ọkụ gbazee nrapado ihe nkiri lamination abụrụla isi ọrụ nke ọtụtụ ndị na-emepụta elektrọnik ejirila kemgbe ọtụtụ afọ. Ihe nlere a na - ere ire oku na ndida Asia.
EAA na-ekpo ọkụ gbazee nrapado ihe nkiri nwekwara ike-eji na ndị ọzọ na ákwà na lamination na metal bonding.
Nke gara aga: EVA ọkụ gbazee nrapado web film
Osote: PO na-ekpo ọkụ gbazee nrapado ihe nkiri maka friji evaporator
Ugboro abụọ kwadoro nrapado Film
Hot gbazee nrapado Film Roll
Pu nrapado Film
Ihe nkiri Ntinye Tpu
Tpu na-agbanwe Nrapado Nkiri
Hot gbazee style printable nrapado mpempe akwụkwọ
Hot gbazee nrapado film maka n'èzí uwe
PA gbazee nrapado nkiri
Hot gbazee nrapado teepu maka akpụkpọ ụkwụ
TPU Hot gbazee nrapado nkiri maka uwe n'èzí
Hot gbazee lettering ịcha mpempe akwụkwọ
Okwu: 111, Iwuli 5, No.1101, Huyi Road, Nanxiang, Jiading District, Shanghai, China
Adreesị :lọ Ọrụ: Qidong obodo, Jiangsu Province
Ìgwè: +86 18512142852 / + 86 13358078959